Semalt Inoparidza An Amazing Scraping Software
script. Inotsvaga mazwi, mazano uye zvinyorwa zvakasiyana pamapeji ewebhu. Mukati, kubhururuka kwewebhu kunotarisa kuwana ruzivo rwakakosha rwevashandi varo pamusoro pematare.
Sei Webhusaiti yeCrawler Works
Muchengeti webhuta anotora mapeji pawebhu ndokubva aisa zvikamu nenzira yakazvimirira kutsigira mimwe mibvunzo - umzugskartons gnstig schweiz. Vanhu vanoita webhusaiti vanoita basa rose pasi pemazita akasiyana-siyana, semabhobhoti uye vanowanzofungidzira. Nguva imwe neimwe vatsva vewebhu vakagadzira imwe tsvakurudzo yekutsvaga, ava vanogadzirisa vanogona kuverenga mapeji ose akakodzera ewebhu kuti vawane dhenda chaiyo. Apo vanocheka vanoshanyira peji yewebhu, vanogonawo kutarisa mamwe mapeji akakodzera kushanyira. Somugumisiro, webwiti dzewebhu dzinogona kuyananidza kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana, nyora manotsi ekugoneka kwekushandiswa kune nzvimbo dziripo uye vanogonawo kuona chero yakafa. Nenzira iyi, webwende yewebhu vanogona kutamba mumapeji akasiyana-siyana ewebhu kuti vawane migumisiro inotarisirwa nevatengi vavo. Uyezve, vadzidzisi vewebhu vanogona kusarudza kuti ndeipi yemapeji avo vanoda kuvhara.
Dhipatimendi reMari: Chirongwa Chinobudirira
Kupinza migodhi kunogona kubatsira vashandisi vewebhu kuti vabudise ruzivo rwakasiyana-siyana kubva kune databases kuburikidza neIndaneti. Basa iri rinodzivirira nguva uye simba, uye naizvozvo vanogona kuita mamwe mapurogiramu emakambani avo. Pane zvimwe zvigadzirwa zvekutsvaga deta zvinogona kuongorora maitiro ekare evamwe vashandisi uye vanogonawo kufanotaura matanho anogona kubatsira mabhizinesi kubudirira. Nhasi, kudhonza kwemigodhi kunogona kuwana mapepa epa data pamusoro peInternet iyo kunyange vashandi vanogona kushaya. Dhamba rekutsvaga dhiyabhorosi inzira yakakosha uye yakakurumbira. Munguva yechirongwa chekubudisa, vekutsvaga webhutheni vanofanira kutarisana nekanganiso dzepamusoro peji, pamwe nedzimwe nheyo dziri mumitauro yakasiyana uye dzisina kukodzera mazita-ups.
Bvisa data kubva mumifananidzo
Makambani akawanda mazuva ano anowanzobvisa mifananidzo yekuenzanisa kwekutengesa, uye vanoedza kuvatsvaga kuti vape zvimwe zviri nani kune vatengi vavo. Nekushandisa webhuhu yekunyorera, vanogona chaizvo kuona mifananidzo yezvinhu zvakafanana, pamwe chete nemishonga yakafanana pamusika.
Kukosha Kwevashandi vepaIndaneti
Nhasi makambani akawanda anoshandisa webwende yewebhu kuitira kuti ave nehutano hwakasimba hwekutsvaga, nekuunganidza zvinhu zvakasiyana-siyana, semitengo yemiti yakadaro, kuongorora , nhare dzekunyorera uye mifananidzo yakawanda. Mifananidzo iyo yavanounganidza inogona kuvabatsira kuvandudza mabasa avo uye kununura michina yakanaka nemitengo kupfuura vadzikwi vavo. Somugumisiro, vanogona kuita kuti sangano ravo rioneke zviri nani uye rive rakabudirira. Nokudaro, vashandi vewebhu vanogona kubatsira zvinoshamisa kumabhizimisi, akadai e e-commerce nzvimbo uye mamwe mabhuku, anoda kuve anobatsira uye kubudirira. Mabhizinesi mazhinji pasi pose nhasi ari kutsvaga kuwana nzira dzakabudirira uye dzakabudirira dzekukunda vadzikwi vavo uye kuwana vamwe vatengi. Vanhu vanogadzira webhutori vanogona kuvabatsira kuti vabudirire, kuburikidza nekuvandudza hutano hwezvigadzirwa zvavo, vane zvigaro zvepamusoro uye vanopa zviri nani.